Fikambanana « Anciens de Saint-Michel »: miasa ho an’ny fampandrosoana nandritra ny 100 taona | NewsMada
Fikambanana « Anciens de Saint-Michel »: miasa ho an’ny fampandrosoana nandritra ny 100 taona
Par Taratra sur 26/07/2021
Ny 21 jolay 2021 teo, nametraka fahatsiarovana ny faha-100 ny Fikambanana « Anciens de Saint-Michel” tao amin’ny kolejy Saint Michel, Amparibe. Tamin’io fotoana io no navoitra ny tanjon’ny Fikambanana sy ny ezaka efa vitany ho fampandrosoana ny firenena nandritra izay 100 taona izay. Fanamby apetrak’ity kolejy tantanin’ny zezoita ity ny hoe « Miorim-paka, hanasoa olona ». Hanasoa olona midika hanasoa ny tanindrazana.
Taona maromaro tato ho ato, niasa ho fampandrosoana ny sosialy sy toekarena ny «Anciens de Saint-Michel », anisan’izany ny famatsiana herinaratra amin’ny tanàna iray any Ambatomirahavavy, famitana ny fiangonana EKAR Victoire Rasoamanarivo niarahana tamin’ireo misionera zezoita avy any Alemaina, fanamboarana sekoly ambaratonga voalohany sy toeram-pitsaboana any Antsahalalina, distrikan’i Manjakandriana, niarahana tamin’ny Fondation Orange. Mitohy ireo asa hafa amina sehatra maro.
Isan-taona, miaraka izy ireo manao fambolen-kazo, ary isaky ny alahady fahatelo mamonjy fotoam-pivavahana ao amin’ny kolejy, izay afaka. Isaorana ny mpikambana rehetra mampita izay norantoviny tao amin’ny kolejyy eny amin’ny tontolo misy azy ho fampandrosoana ny maha olona.
Ny taona 1921, nijoro ny Fikambanana « Anciens de Saint-Michel », ka filoha 20 hatramin’izao ny nifandimby nitantanana azy. Filoha voalohany, Rajoelina Joseph (1921-1927), ary ankehitriny, Andrianarisoa Aina, nanomboka tamin’ny 2019.